December 2009 – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on December 30, 2009 February 19, 2010 by kyawkyawoo
Now, you can read the biography of famous Burmese Muslims, Sayar Maung Thaw Ka, and Sayar Kan Chun, in Wikipedia.… Read more Biography of Maung Thaw Ka and Kan Chun in Wekipedia
Posted on December 30, 2009 by kyawkyawoo
Posted on December 29, 2009 February 19, 2010 by kyawkyawoo
အမျိုးသမီးနှင့်မီဒီယာဟူသော စကားလုံးတွဲကို စဉ်းစားတိုင်း ကျွန်မအာရုံတွင် ပေါ်လာသော ကြော်ငြာလေးတခု ရှိသည်။ အဲဒါက နှစ်အနည်းငယ် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သော မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား ကြော်ငြာတခု ဖြစ်သည်။ ပန်းကန်အိုးခွက်ဆေးသည့် ဆပ်ပြာရည်တခုကို ကြော်ငြာခြင်းဖြစ်သည်။ ခိုင်သင်းကြည်က ပန်းကန်ဆေးပြသည်။ ခိုင်သင်းကြည် လှပါသည်။… Read more မီဒီယာနှင့်ဂျင်ဒါ ရေးသူဂျူး
Posted on December 23, 2009 February 19, 2010 by kyawkyawoo
Following is the link to ” List of converts ( Reverts)to Islam” from Wikepedia. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_converts_to_Islam
Posted on December 23, 2009 December 30, 2009 by kyawkyawoo
Original Post by Idris Tawfiq (Reading Islam) Religious intolerance has become too muchapart of modern life. It is… Read more Religious Tolerance in Muslim History